samedi, 28 mars 2020 13:54
Emma Theofilus: Minisitra amperinasa tanora indrindra manerantany, 23 taona
Mpikambana ao amin’ny governemanta any Namibia i Emma Theofilus. Ny 23 marsa 2020, anatin’ny vanim-potoana mampirongatra ny valanaretina coronavirus manerantany, no nanendrena azy ho minisitra lefitra misahana ny teknôlôjia, ny fampahalalam-baovao ary ny serasera.
Manam-pahaizana momba ny lalàna izy, nianatra tao Namibia sy tany Afrika Atsimo.
samedi, 28 mars 2020 08:59
Mety mahasoa anao, azo atao na mbola tsy marary aza
- Voamaintilany 7 indray mihinana vao mifoha alohan'ny sakafo, atelina tsirairay amin'ny rano kely (mety ihany koa amin'ny fiarovana amin'ny pesta), miaro mandritra ny 3 volana, misy mety mandoa raha tsy mahazaka azy.
- Hevoka kininim-potsy sy ravitsara
- Gararaka thin sy alamo kely na sira (tandremo tsy mety amin'ny bevoka ny thin)
- Ny tantely sy voasarimakirana ary ny sakamalaho moa efa fantatry ny maro. Ny huile coco osorana ny orona, andrina, tratra, ny kibo, na ireo vanin-taolana mangotsoka. Ny menaka vonjy, amboarindry masera koa tena tsara.
- Mihinana voankazo betsaka